IBhetani 66 Umthendeleko - Ulwazi ngendawo, imisebenzi kunye nokunye
Eunited States E Oklahoma SaseKlahoma
EBethany 66 Umthendeleko
Unyaka ngamnye, isixeko saseBethany, eKhaithani sigubha kunye neBhetani 66 Itheko yedolophu, isiganeko esinobuhlobo bentsapho ebonisa ukuzonwabisa ngokuzonwabisa, imbonakalo yemoto, indawo yabantwana, ubugcisa kunye nabathengisi bezobugcisa, ukutya nokunye. Exhaswe yi-Bethany Improvement Foundation, umthendeleko uqhutywe ngasekupheleni kukaMeyi.
Imihla namaxesha e-2017:
Ithenda ye-6 yeBhetani yonyaka 66 Ixesha leMthendeleko liqhuba ukususela ngo-10 ekuseni ukuya ku-4 ntambama ngoMgqibelo, ngoMeyi 27.
Ngo-6: 30 ntambama ebusuku, imoto, iilori kunye nezithuthuthu ziya kuhamba ukusuka eBethany ephakathi kweLake Overholser . Kuya kubakho kwakhona amakhonsathi angabhalwa kwindawo yokupaka ngalobo busuku, ukuqala nge-7 ntambama
Indawo kunye nezikhokelo:
I-66 egama lomcimbi ibhekisela kuMzila we-66, ngokuqinisekileyo, kwaye ukubhiyozelwa kubanjwe kwisitalato yezakhiwo e-Bethany. Landela i-NW 39th Expressway ukuya ngasemntla, ngasempuma kwiBeith Children's Centre kunye nezantsi kweYunivesithi yeSouth Nazarene. Isigaba sokuzonwabisa esikuyo siphakathi kweAsbury kunye neeKholeji zeeKholeji, kwaye ukudibanisa ukutshintshela ku-NW 38th Street.
Umdlalo wokuzonwabisa kwiBhetani 66 Umthendeleko uquka aba benzayo ngoMgqibelo:
10: 00-10: 45 nguTBA
11: 00-11: 45 nguTBA
Ngobusuku - 12:15 ntambama iTBA
12:15 - 12:45 pm TBA
1: 00-1: 45 pm TBA
2: 00-2: 45 pm TBA
Ngezinto ezininzi zokuthengisa, kuquka ubugcisa nemisebenzi, iBethany 66 Uluhlu lwabathengisi lukhulu kwaye luhluke.
Iquka iinkonzo ze-chiropractic, iibhanki, isikhumba, izipikili, i-peleni negadi, iincwadi kunye nokunye okuninzi. Kukho amagama athandwayo anjengeScentsy, Chef Pampered, Avon kunye neTupperware.
Ukongeza kwizinto zokuzonwabisa ezithandwayo, ukutya kunye nokuthenga, iindwendwe zeBhetani 66 Imikhosi ijonge imoto / iloli / isithuthuthu, ukutshintshana ukuhlangabezana kunye ne-Buckboard quilt ibonise kwaye ithengiswe.
Kwakhona, i-Princess Children / Action Hero Parade iqala ukusuka kwi-NW 39th Expressway ne-Asbury ngo-11 ekuseni
Ukubhaliswa kunye nolwazi olungaphezulu:
Ukubhaliswa kwabathengisi bokutya kubangama-$ 100 ngelixa ukuthengisa, ubugcisa kunye nezobugcisa kubhalisi be-$ 50. Ukungena kwimoto / iloli / isithuthuthu sibonisa iindleko ze-$ 15 phambi kwe-Meyi 1, emva kwe-$ 20 emva. Bhalisa kwi-swap ukuhlangabezana nge $ 25. Iifom ziyafumaneka kwi-intanethi kwi-bethany66.com.
Ukufumana ulwazi olungakumbi, imeyile uAllita Harris kwi-arlita.harris@gmail.com.
Ukupaka kufuphi neSikhumbuzo seSizwe saseKlahoma
Ukukhohlisa-okanye-Ukunyanga e-Oklahoma City
Imithetho yokuNkcenkceshela yaseKlahoma
Iindawo zokutyela zase-Oklahoma City
Iindawo eziPhambili zokuPaka ezikufutshane ne-Chesapeake Energy Arena
Iikholeji zasehlobo zase-Oklahoma City 2017
Yintoni Ubunzima beMicrosoft?
Izinto ezili-10 zokwazi xa uvakatyela eMontreal yaseMdala
Kuphi ukufumana ukutya okuthe ngqo kwiLondon
I-Monte Argentario Inkqubo Yokuhamba
Ngomso we-Oxford-South we-High Street, Emva koko ukuya kwi-Pub
Indlela Yokufunda Ngaphandle Kwakho Inokukunceda Uphucule Iphupho Lakho Umsebenzi
Indlela yokufumanisa ukuba iSikole sakho saseKlahoma saseKlahoma sivaliwe
UMalaga waya eAlicante ngoTeyi noBhasi
Amaziko okuhlalisa amaGay aseLos Angeles kunye neCock Clubs Guide
I-Los Angeles Film Festival iKhalenda 2016 - 2017 - Page 1 kwe-3
I-Helicopter yeParadise yeParmum Experience Tour
Usuku lokuzimela kwi-Rock Rock